15 Tsy misy fomba Bullsh * t hahatsapa firaisana indray - -Kevi-Pitantanana
Ny 'fahatsapana ny firaisana' dia zava-bita sarotra loatra ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ary ny vehivavy manokana dia toa sahirana mba hahatsapa ho tsara momba ny tenany sy ny firaisana ara-nofo.
Nahazo torohevitra tsara momba ny fahatsapana tsara momba anao indray izahay sy ny fomba fampiasana ny firaisana ara-nofo amin'ny maha-vehivavy anao.
Ny sasany amin'izy ireo dia mety toa mahitsy, nefa tena mendrika hatao - matetika.
Arakaraky ny anaovanao ny fahatsapana ho fatra-pitia amin'ny fahazarana no mety hahatonga anao ho lasa fanjakana voajanaharinao.
1. Asehoy fitiavana ny tenanao.
Mora kokoa ny milaza fa tsy vita, mazava ho azy!
Ity dia fanjakana kokoa noho ny toerana fiafarana, noho izany aza manantena fiovana goavana indray alina.
Ny fianarana mitia ny tenanao dia mitaky fotoana lava, fa zava-dehibe ny fandehanana ary manomboka zatra ilay hevitra.
Mety ho elaela ihany ny fahatsapana firaisana indray, fa afaka manomboka amin'ny filazanao amin'ny tenanao hoe tia ny tenanao ianao.
Miderà tena amin'ny zavatra tianao momba ny sainao, ny toetranao ary ny vatanao.
Na inona na inona tianao momba ny tenanao dia mendrika hankalazana, ary manana toerana tsara hanaovana izany ianao!
Afaka manomboka isan'andro amin'ny mantra ianao, mampatsiahy ny tenanao ny maha-zava-dehibe sy mahavariana anao. Jereo ny fitaratrao ary ekeo hoe iza ary Ahoana ianao dia. Lazao amin'ny tenanao fa tia ny tenanao ianao, manaja ny tenanao ary te hahatratra zava-mahatalanjona.
Ho zatra mihaino azy ianao ary tsy ho ela dia hino izany ary hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny tenanao amin'ny lafiny rehetra.
2. Manaova andro fampahalalana iray.
Sary an-tsary ny sary mihetsika rehetra misy ny sary mihetsika mifototra amin'ny fisarahana - misy hatrany ny andro fampahalalana tafiditra amin'ny fotoana iray, ary misy antony marim-pototra.
Ny fikolokoloana ny tenanao amin'ny zavatra mahafinaritra dia hahatonga anao hahatsapa ho tena tsara, ary hahatonga anao hahatsiaro ho sarobidy amin'ny tenanao.
Rehefa be atao isika dia matetika tsy miraharaha ny fanehoana fitiavana sy fiheverana ny saintsika sy ny vatantsika.
Mety ho zavatra kely izy io, manomboka amin'ny fandroana lava kokoa ary mankafy ny hafanana sy fofona tsara amin'ny fandrahoana ny sakafo maraina tianao indrindra ary ny fisotroana kafe matsiro sy miadana maraina.
Asehoy ny tenanao hoe maninona ianao ary manaova zavatra tsara ho anao. Vitao ny hohoo, makà cocktail mahafinaritra, ary mandany ny andro manome voninahitra ny tenanao ho andriamanibavy ianao!
Raha mahita olona mamelona voaloboka ianao, mbola tsara kokoa aza.
3. Kapohy ny gym.
Betsaka ny olona - indrindra ny vehivavy - no miasa ho toy ny karazana sazy na fikojakojana.
Mieritreritra izy ireo hoe: 'nanana karbôly aho tamin'ny sakafo atoandro ka izaho eFA handoro azy io, 'na,' Raha tsy mandeha aho anio dia hahazo lanja aho. '
Tsy vitan'ny hoe manimba be izany amin'ny maha-kolontsaina amin'ny ankapobeny, dia tsy mahatonga anao hahatsapa ho tsara amin'ny tenanao!
Ny fampihetseham-batana dia mahatalanjona amin'ny fomba maro hafa noho ny fihenan'ny lanja sy ny fitomboan'ny hozatra. Izy io dia mamoaka endorphins izay mahatsapa antsika tena tsara.
Ny fandehanana any amin'ny gym dia mety toa tsy mahasosotra raha hatsembohanao izany, fa ny fahatsapana aorian'izay dia tena tsara ary maharitra fotoana mahagaga.
Ho tianao ny miasa ho an'ny fahasalamanao ara-tsaina sy ny fahatsaranao fa tsy endrika sazy.
Ho setrin'izany, hifanaraka amin'ny firaisana ara-nofo ataonao ianao - hahatsapa ho tsara ianao amin'ny fandanianao fotoana kely ho anao, ary afa-po amin'izay azon'ny vatanao atao, ara-batana.
Ity rohy ity dia miverina aminao manome fotoana anao manokana ary mifantoka amin'izay mahasambatra anao, avy eo mahatonga anao ho tia sy hanaja ny tenanao bebe kokoa - hitarika anao hahatsapa ho vetaveta indray.
4. Mividiana akanjo fampisehoana.
Averina indray, ity dia sosokevitra kely fotsiny amin'ny soso-kevitra momba ny sarimihetsika, ary mila teti-bola kely izany…
… Fa mendrika izany!
Mitadiava akanjo ahafahanao mahatsapa tsara sy manaja fa mety tsy hitovy amin'ny tao an-tsainao izany.
Tsy misy ratsy kokoa noho ny fanerena ny tenanao hahita akanjo miloko mainty manjelanjelatra ary mahatsapa fa tsy te hampiseho faritra sasany amin'ny vatana.
Fa kosa andramo ny fomba sy ny akanjo isan-karazany ary jereo izay mahatsapa tsara.
Ho hitanao amin'ny farany izay zavatra hahatonga anao hahatalanjona rehefa mijery fitaratra ianao ary te-hitafy azy mandrakariva!
Raha tsy azonao antoka ny zavatra hiaraka dia makà namana akaiky. Ho fantatr'izy ireo izay mifanentana aminao ary afaka manosika anao hanandrana zavatra mety ho sorohinao matetika.
Tehirizo amin'ny fotoana manokana ny akanjo na apetraho mandritra ny alina ny tanàna. Na izany na tsy izany, mitadiava zavatra mahatonga anao hahatsapa ho manintona sy mahafinaritra… ary mankafy ny fizotrany!
5. Mitondrà akanjo lava amin'ny filokana.
Tadidio fa akanjo ho anao izany!
Betsaka ny vehivavy no mividy atin'akanjo hitafy eo imason'ny mpiara-miombon'antoka aminy - ny vatanao dia tsy natao hanaovana matso eo imason'ny olon-kafa (fa tsara raha izany no mahatonga anao hahatsapa ho tsara), ka zatra manao akanjo ho anao ary mahatsapa tsara izany .
Mankanesa any amin'ny fivarotana iray ary angataho ny mpikambana iray amin'ny mpiasa handrefesana anao araka ny tokony ho izy - ho azon'izy ireo atao ny misafidy ireo fomba sahaza anao sy izay mety ho toetranao.
Misafidiana zavatra mahazatra sy mahatsikaiky ho an'ny ambanin'ny fitafianao amin'ny andro mahazatra, na mandehana amin'ny zavatra mahafinaritra azonao alefa manodidina ny tranonao miaraka amin'ny divay iray vera sy mozika mafy!
Na izany na tsy izany, ny tanjon'ity atin'akanjo kanto ity dia ny fampatsiahivana ny tenanao fa mendrika zavatra mahafinaritra ianao ary mendrika ny hahatsapa ho tsara.
Mora ny miditra amin'ny roti miaraka amin'ny tenantsika ary tsy mieritreritra izay apetrantsika amin'ny vatantsika. Miakanjoa amin'ny isa kely mahafatifaty ary mankafiza ny fahatsapana amin'ny hoditrao - ary ny fahaizanao mijery fitaratra.
6. Makà fomba fijery kely.
Aza mampitaha ny tenanao amin'ny olon-kafa!
Zava-dehibe izany ary zavatra izay melohin'ny ankamaroantsika.
Mora dia lavitra loatra ny manomboka mieritreritra izay ananan'ny olon-kafa raha oharina amintsika, ary ny antony tsy dia tsara toa ny olon-drehetra.
Ireo dia mety ho fampitahana ara-batana, na miankina amin'ny toetrantsika sy ny fahaizantsika.
Tena tsy misy dikany izany ary isika rehetra kosa dia manao azy amin'ny fotoana iray! Farany, tsy hahatoky fahatokisan-tena sy ho matotra mihitsy isika raha milaza amin'ny tenantsika foana fa 'ambany' noho ny olon-kafa isika.
Tsy hitranga eo noho eo izany, fa ny fandraisana fepetra hamaranana ny fampitahana ataontsika dia fiovana lehibe amin'ny làlana tsara.
Amin'ny fifantohana mavitrika tsy miteny ratsy ny tenanao , afaka manomboka mitia ny tenanao amin'ny fombanao ianao.
Ilaina ihany koa ny mieritreritra ny fotoana sy ny antony nijanonanao tsy hahatsapa firaisana. Moa ve taorian'ny fisaraham-panambadiana na fanehoan-kevitra ratsy nataon'ny olona iray, na taorian'ny fanananao zanaka na niraikitra tamina fanambadiana tsy fantatra?
Ny fieritreretana ny nahatonga ny fahatokisanao fahatokisana sy ny antony tsy ahatsaranao ny tenanao dia fomba tsara handefasana zavatra ary mety hamerina ireo sombinao hadinonao.
Angamba ny fandaniana fotoana handinihana ny fihetseham-ponao izao dia mitondra fahatsiarovana vitsivitsy izay hadinonao ary mila hikatonanao.
Ohatra, angamba nolavin'ny olon-tianao ny fandrosoanao indray alina ary mbola mahatonga anao hahatsapa ho tsy ilaina amin'ny ambaratonga ambany.
Na inona na inona mampifandray anao amin'io fahatokisan-tena io dia hahita fomba iray hivoahana ianao amin'izay ary afaka manomboka mahatsapa ho faran'izay mahatsikaiky indray mandeha indray!
Fomba ahazoana aina amin'ny hoditrao: 17 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
7. Mandrehitra labozia vitsivitsy.
Labozia fotsiny dia mahafatifaty, tsy misy fanontaniana momba izany.
Na inona na inona karazana asa ataonao, na manahirana toy inona aza izany, ny labozia dia hanampy anao hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny tenanao.
Azo antoka, mety tsy dia be loatra rehefa manadio ianao, fa rehefa mahandro, mandro, miomana am-pandriana sns. Manampy fihetseham-po mampientam-po fotsiny amin'ireo hetsika mankaleo be dia be izy ireo.
Mandehana mitady fofona, jiro dite kely manaraka ny peratrao, na jiro mamiratra lehibe eo afovoan'ny latabatrao.
Ataovy ho fombafomba izany - angamba mandrehitra labozia alohan'ny handroana mafana na handroana ianao, angamba alohan'ny hatory.
ny fomba fanaovana fotoana handosiranana any am-piasana
Na izany na tsy izany dia manomboka mampifangaro labozia amin'ny zavatra amin'ny fanazaran-tena ataonao ianao izay afaka mampifandray amin'ny fomba anao hahatsapa amin'izay fotoana izay amin'ny fanaonao.
Ohatra, ny labozia fanaovan-jiro isaky ny misasa ianao dia hahatonga an'io fandroana io hahatsapa ho mahaliana sy mahaliana kokoa.
Ny fampifandraisana ireo hetsika mahazatra amin'ny zavatra mahaliana kokoa, miala sasatra na mahafinaritra kokoa dia hanampy ny sainao hifantoka amin'ny fahatsapana ho manintona sy afaka.
Ny labozia manome jiro dia afaka manampy anao hanana ny toetranao ary mariky ny famitahana eran'izao tontolo izao, koa mandehana…
8. Mialà sasatra ary mankafiza fotoana fohy.
Ny tsy fandroana dia ampahany lehibe amin'ny fahatsapana tsara momba ny tenanao ary afaka manampy anao hiditra amin'ny fisainana marina.
Iray amin'ireo olana atrehin'ny vehivavy maro amintsika ny fahatsapana fihenjanana loatra mba 'hahazo ny toe-tsaina'.
Sarotra ny mahatsapa ho manintona rehefa manasongadina zavatra arivo hafa ianao.
Midira amin'ny fahazarana mihodina ary manana fotoana hialana sasatra sy hankafizanao fotsiny Ny hoe .
Hanampy anao hahita zavatra ankafizinao indray ity (satria maro aminay no meloka amin'ny 'be atao' loatra amin'ny fialamboly / manandrana zava-baovao) izay hahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny ankapobeny.
Rehefa mahatsapa milamina ianao ary mankafy ny fiainana bebe kokoa, dia ho hitanao fa mora kokoa ny mahatsapa ho olon-dehibe kokoa - ary mamela ny tenanao hanana fotoana hanaovana izany.
Tsy misy ratsy kokoa noho ny fahatsapana fanerena hahatsapa na ‘ho’ mahamenatra, na inona na inona tena dikan'izany!
Mety hanohitra avy hatrany an'ity iray ity ianao (ary hitovy aho), fa mahazoa ahy.
Toy izany koa ny fanazaran-tena mamoaka ireo endorphins mampihetsi-po mahafinaritra, mandao ny vatanao sy ny sainao mahatalanjona ny fandihizana.
Midira amin'ny kilasy eo an-toerana ary manaova fampihetseham-batana amin'ny fotoana iray na alao fotsiny ny mozika rehefa irery ao an-trano ianao.
Na izany na tsy izany, zatra ny fahatsapana fa mifindra mozika ary mankafy ny fientanam-po amin'ny fanetsiketsehana ny valahanao, ny vodinao ary ny vatanao.
Ny zavatra tsara indrindra eto dia ny tsy fandihizanao amin'ny olon-kafa - ity fotsiny ho anao mba hiala voly ary hamotsotra kely.
Ho setrin'izany, ho lasa mifanaraka bebe kokoa amin'ny vatanao ianao ary hahita fomba vaovao hifindra izay mahatsapa tsara.
Izy io koa dia mampiroborobo fahatokisan-tena - mety tsy dia toy izany tamin'ny voalohany, fa raha vao tafavoaka ny fahamenarana voalohany ianao dia ho tianao.
10. Manandrama zava-baovao.
Tsy mila manao zavatra mahasosotra hanampy anao ity hahatsapa mahasarika, aza manahy.
Ny zava-dehibe indrindra eto dia ny fametrahanao ny tenanao any ivelany ary atosika ny fetran'ny faritra misy anao.
Na inona izany na inona dia hahatonga anao hahatsapa tena mahatalanjona rehefa vitanao izany.
Raha raikitra ny hevitrao dia mangataha torohevitra ho an'ny namana sasany. Afaka mieritreritra zavatra fantatr'izy ireo fa ankafizinao izy ireo, ary mety hiaraka aminao koa.
Ataovy mahafinaritra sy fiaraha-monina izany - tsy ny dingana rehetra amin'ny dia fivelaran'ny tenanao dia mila irery!
Ampidiro olona maro kokoa ary manomboka mahatsapa ho tompon'andraikitra ianao. Hanomboka hitodika ianao - ho azy ireo, hifikitra amin'ny drafitrao, ary, amin'ny farany, ho an'ny tenanao satria mendrika izany ianao!
Tsy mila mihaodihaody loatra ianao, fa misy fialam-boly mahafinaritra be dia be miandry anao hanandrana.
Mandrosoa ao anatiny, ankafizo ny tenanao, ary lazao amin'ny tenanao fa mirehareha amin'ny fanaovanao zava-baovao ao an-damosinao ianao fa tsy amin'ny olon-kafa.
Hihombo ny fahatokisan-tena anananao amin'ny fahafantarana fa nanao zavatra hafa ianao ary nametraka ny tenanao tany - ary fantatsika rehetra fa ny fahatokisana izany ANDININ- mahatsapa firaisana.
11. Tanisao ireo fiasa tianao indrindra.
Fantatro, fantatro - tena tsy dia tsara, marina?
Tsy mila ratsy be toa ny namoronanao azy ho ao an-dohanao na izany aza!
Ny teboka iray fanaovana io fanazaran-tena io dia ny manampy anao hifandray bebe kokoa amin'ny tenanao, amin'ny ambaratonga tsirairay.
Mandany fotoana be loatra isika amin'ny fanaovana zavatra ho an'ny olon-kafa ary mihazakazaka any am-piasana na miaraka amin'ny ankohonantsika sy ny namantsika ka tsy raharahiantsika hikarakara ny tenantsika.
Ity asa ity dia fomba iray handaniana fotoana bebe kokoa amin'ny tenanao ary hanombatombanana hoe iza ianao ary inona no tianao amin'ny tenanao.
Mety misy ifandraisany amin'ny bika aman'endrinao raha tianao - manaova lisitry ny ampahany amin'ny vatanao tianao, mideraha ny masonao, manomeza voninahitra ny tenanao amin'ny fomba fitafinao.
Toy izany koa, mandany fotoana kely hieritreretana momba ny toetranao sy izay tianao momba azy.
Ho lisitra lava kokoa noho izay noeritreretinao tany am-boalohany no hiafaranao, ary hanana zavatra horesahina ianao rehefa kivy ianao.
Ny tiana hambara dia ny hampatsiahivana ny tenanao fa lehibe tokoa ianao - ary mila avy aminao izany!
Tsara sy tsara daholo ny teny fiderana, ary mety hahatonga anao hahatsapa ho mamirapiratra, saingy mila mianatra mitia ny tenanao ianao ary tena hanampy izany.
Dingana kely izy io, saingy ho lasa lavitra amin'ny fanampiana anao hahatsapa ho vetaveta indray.
12. Milalao kely.
Ankehitriny, miharihary fa miankina amin'ny toeran'ny fifandraisanareo izany satria tsy manohana ny hosoka mihitsy izahay!
Azonao atao ny milalao miaraka amin'ny olon-tianao na miaraka amin'ny daty iray raha mpitovo ianao. Ny tanjon'izany dia ny hahatonga anao ho matoky tena sy mahazo aina.
Mahafinaritra ny milalao sy milalao kely, ka aza matahotra ny ho adala kely na manao milalao andraikitra miaraka amin'ny mpiara-miasa raha toa ka mahazo anao!
Ny filalaovana fitia dia mampahatsiahy anao ny fahafinaretanao sy ny fanodikodinanao, izay zavatra tsara foana. Hahatonga anao hahatsapa ho faniriana sy mahaliana - ary manaitaitra.
13. Mividiana ranomanitra vaovao.
Ity iray ity dia mandany vola, fa tena mendrika izany raha safidy ho anao io.
Impiry ianao no nandia olona iray ary nieritreritra ny hanitra ho azy ireo?
Ny fofona tsara fotsiny dia… ara-nofo! Tsy azo lavina izany.
Ny fofona fofona tsara dia ampahany lehibe amin'ny fahatsapana ho tsara, izay, kosa, hahatonga anao hatoky tena bebe kokoa, manintona kokoa, mahaliana kokoa, ianao no manome anarana azy.
Hahatsapa ho tsara ianao ary ho tsikaritry ny olona fiovana ary te ho eo akaikinao bebe kokoa. Hanintona azy ireo koa ny zava-misy fofona mahagaga anao.
Mahafinaritra ihany koa ny mitsabo tena ary mampatsiahy ny tenanao fa mendrika zavatra mahafinaritra ianao satria olona mahatalanjona ianao.
14. Mametraha jazz vitsivitsy.
Ho an'ny fampifangaroana tonga lafatra: mitendry mozika jazz, alao ny atin'akanjoo manaitaitra ary hazavao ny labozia.
Matokia ahy, mandeha io.
Mandehana jazz milamina na karazana mozika mahatsapa manintona sy mampientam-po anao.
Tsy mila mandihy ianao amin'ity indray mitoraka ity, aza manahy! Eo fotsiny ny mozika hanampy anao hiala sasatra sy hanamora ny fahatsapanao ho malefaka kokoa.
Ny mozika dia manampy ny saintsika hihatakataka amin'ny adin-tsaina amin'ny fiainana andavanandro izay afaka manakana antsika tsy handray tena firaisana ara-nofo.
Efa nahatsapa ho toy ny ‘ao an-dohanao’ loatra ve ianao mba tena hidina sy hankafy zavatra iray? Jazz!
Ny fifantohana amin'ny ati-doha amin'ny zavatra mihetsiketsika dia hahatonga izany fihenjanana izany hiempo sy hamela toerana ho anao hahatsapa ho matoky tena sy manao firaisana.
Izy io dia mahazatra ary isika fotsiny nanana hanasongadinana azy ato amin'ity lisitra ity.
Mety tsy dia tianao manokana ny vatanao, ary tsara izany. Tsy fanatanjahan-tena ity mba hanampiana anao hitia ny tenanao, satria nanome sosokevitra maro hafa izahay momba izany (na dia, azonay antoka tsara fa ny fitiavanao ny tenanao dia ho voka-droa voajanahary amin'ity asa ity).
Ny fahazarana mitanjaka dia ny fahazarana irery. Mety ho hadalana izany, raha adiny firy no laninao amin'ny tenanao - ara-bakiteny rehetra ny fotoana - nefa mandeha.
Impiry ianao no tena mifanaraka amin'ny tenanao sy ny fahatsapanao sy ny fisehoanao ary ny fihetsiky ny vatanao?
Mahalana, maminavina aho.
Ary, raha manao an'izany ianao, firy amin'ny fotoana lany amin'ny fandinihana ny tenanao, menatra ny marika mihinjitra, sosotra amin'ny fahazoana / fatiantoka mavesatra na 'be atao' loatra ka mankafy mitanjaka fotsiny?
fahasamihafana eo amin'ny fitiavana sy ny fitiavana
Noho izany, tsy ny fahatsapana fahatokisana eo no ho eo izany ary eo no ho eo be fitiavana ny vatanao.
Ny momba ny fandaniana fotoana miaraka aminy sy ny fianarana momba azy - ny toa azy amin'ny lafiny samihafa, ny halehiben'ny hoditrao ary ny hatsaranao.
Zatra amin'izay hitanao fa mitanjaka ianao satria fanjakana tsara hiaina izany!
Arakaraky ny hahatongavanao bebe kokoa amin'ny tenanao no tsy mahataitra anao (sy ny hatairana?) Mety ho tsapanao rehefa hitanao fa mitanjaka tsy nahy ianao.
Betsaka ny olona mahita ny tenany amin'ny zoro vaovao, miboridana ary mikorapaka satria 'tsy mitovy' amin'izay antenainy.
Eny - zatra izany ary antenao ny fahamarinana manta, marina, mitanjaka. Arakaraka ny ahalalanao ny momba anao, fantaro ny momba anao, ary ekenao ny momba anao, dia vao mainka hitanao faingana ny fiovana ary vao haingana ianao no mahatsapa ho vetaveta indray.
Mbola tsy azonao antoka hoe ahoana ny mahatsapa firaisana toy ny taloha? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
maninona no tsy mila ankizy i john cena
firy ny zaza ananan'i wap fetty
ahoana no ahalalanao fa liana ny tovovavy iray
ny fomba tsy itovizan'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fomba hafa